Gym Workout Planner - Weightlifting Plans Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ချသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉျ - အလေးမအစီအစဉျမြား
အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉျ - အလေးမ APK ကိုစီစဉ်ထား
ဤသူသည်သင်တို့အစဉ်အဆက်လိုပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောယလေ့ကျင့်ခန်း App ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကဒီဇိုင်း● Beginner & Pro ကိုယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
●အကြီးမားဆုံးယလေ့ကျင့်ခန်းမှသင်တန်းဆရာအများစုပြည့်စုံအားကစားရုံယလေ့ကျင့်ခန်း app ကို
●လေ့ကျင့်ရေး Start နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်း
★အလေးချိန်ရုတ်သိမ်းနှင့်ကာယဗလမှနယူး? ပြဿနာမရှိပါဘူး! ငါတို့သည်သင်တို့စတင်ရန်လိုအပ်သမျှရရှိပါသည်။
● Sharp ကဗီဒီယို, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့ကျင့်ခန်းဓာတ်ပုံများ
Tone ခွန်အားသင်တန်း, Slim နှင့်ပိုပြီးအဘို့အ●ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ...
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုသုံးပါနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်တွေ့မြင်မြန်ဆန်! အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်ကြိုးစားကြနှင့်သင်အချင်းချင်းလုပ်လေ့ကျင့်ခန်းဝေမျှဖို့ရဲ့ buddy ထွက်သင့်ရဲ့အလုပ်ရယူပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦခရီးစတင်ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အဆင့်အထိရုပ်သိမ်းသင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုယူပြီးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော app ကို!
လေ့ကျင့်ခန်း APP ကိုလေ့ကငျြ့ခနျး DATABASE
3000 + ဖြစ်နိုင်သောမူကွဲနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း၏●အများကြီး
● Rich ဓါတ်ပုံများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလေ့ကျင့်ခန်း၏ Hi-res ဗီဒီယိုများ
●ကြွက်သား-အာရုံစူးစိုက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သင် toned ရဒီဇိုင်းအပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းအတိအကျနှင့်ခိုင်ခံ့သော
စူပါ-set ကိုပံ့ပိုးသော●တစ်ခုတည်းသောအားကစားရုံ app ကို
●လက်သင်, အလယ်အလတ် & ကျွမ်းကျင်သူလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
● Cardio သငျသညျအပြည့်အဝယလေ့ကျင့်ခန်းအတှေ့အကွုံပေးရအတွက်ရောနှောနေသည်
●ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pre-လုပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဆို Modify and save
● Create, သို့မဟုတ်သင့်လက်ရှိလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ app ကိုထည့်သွင်း
● bodyweight ကနေရှေးခယျြပါ, အချိန်-based အခမဲ့အလေးချိန်သို့မဟုတ်စက်ကိုအခြေခံပြီးလေ့ကျင့်ခန်း
●အားကစားရုံ Tracker: သင်၏အားကစားရုံမှတ်တမ်းမှတဆင့်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသမိုင်းသုံးစွဲနည်း
●သင့်အတိတ်လေ့ကျင့်ခန်း browsing အားဖြင့်လှုံ့ဆော် Get
ဒီအလေ့ကျင့်ခန်း tracker နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ Fitness22, သန်းပေါင်းများစွာကယုံကြည်စိတ်ချသည့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအမှတ်တံဆိပ်ကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
-- ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --
မေးခွန်းများရှိသလား? မှတ်ချက်များ? စိတ်ကူးများ?
မိုင်းနား updates များကို
အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉျ - အလေးမအစီအစဉျမြား
94.58 ကို MB